English for Hotel and Catering Industry (Unit3- Taking Reservation) - အခန်းကြိုတင်မှာကြားမှုအားလက်ခံခြင်း - Myanmar Network
English for Hotel and Catering Industry (Unit3- Taking Reservation) - အခန်းကြိုတင်မှာကြားမှုအားလက်ခံခြင်း
Posted by zar ni (My Way!) on October 25, 2012 at 15:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Taking room reservation - အခန်းကြိုတင်မှာကြားမှုအားလက်ခံခြင်း
unit2မှာတုန်းက ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်ဖို့ there is/ there are structure ကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ဟိုတယ်မှာ အခန်းကြိုမှာလာရင် ဘယ်လိုလက်ခံယူရသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
staff: Good morning, reservation. Philippe speaking. How may I help you?
guest: Hello I’d like to bookaroom for me and my husband, please. Do you haveadouble room for the next Wednesday?
staff: Yes, we do. How many nights is it for?
guest: Two, Wednesday and Thursday.
staff: Yes, we haveadouble room available.
guest: Good, how much is it?
staff: It’s 225 Euros per night including breakfast.
guest: Good, that’s fine. Does the hotel havearestaurant? You see we are arriving in the evening at about7o’clock.
staff: Yes, would you like me to book youatable?
guest: Oh yes please. Can we haveatable for two at 7:30 on Wednesday evening?
staff: Yes, madam, and your name please?
guest: Mrs. Julia Meroe.
staff: Do you haveacontact number?
guest: Yes, my mobile number is 077 80 161 236.
staff: Thank you Mrs. Meroe. Could you send an email or fax to confirm your reservation?
staff: Thank you for calling. Good bye.
guest: Good bye.
ဟိုတယ်တွေမှာ ဘယ်နှစ်ရက်တည်းတယ်ဆိုတာကို ညနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ အခန်းစယူတဲ့အချိန် check in time ကနေ check out time နောက်တစ်နေ့ နေ့လည် ၁၂း၀၀ အထိတစ်ရက်စာအခန်းခ ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် check in time ဟာဒေသစံတော်ချိန် 1400 hrs (နေ့လည် ၂ နာရီ) ဖြစ်ပြီး check out time ဟာ 1200 hrs (နေ့လည် ၁၂ နာရီ)ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုတယ်တွေမှာ သူ့ဟာနဲ့သူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ check in time တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ NewYork မြို့က နာမည်ကျော် Hilton Time Square ဟိုတယ်မှာ check in time ကနေ့လည် ၃ နာရီသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
reservation လက်ခံရာမှာအဓိကအချက်တွေကတော့ reservation ပြုလုပ်သူရဲ့နာမည်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်(သို့) email, နဲ့ အခန်းအမျိုးအစား၊ ရက် စတာတွေကို သေသေချာချာမေးမြန်းနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံတွေကို ပိုင်နိုင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
I’d like to bookaroom, please. အခန်းတစ်ခန်းလောက်ကြိုမှာချင်လို့ပါ။
Do you haveadouble room for the next Wednesday? လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းများအားမလားရှင်။
How many nights is it for? ဘယ်နှစ်ညအတွက်ပါလဲ။
Yes, we haveadouble room available. ဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းရနိုင်ပါတယ်။
Would you like me to book youatable? လူကြီးမင်းအတွက် စားပွဲတစ်လုံးကြိုမှာပေးထားစေချင်လား။
Do you haveacontact number? ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုံးနံပါတ်ရှိပါလား။
Could you send an email or fax to confirm your reservation? ကျွန်တော်တို့ဆီကို အခန်းကြိုမှာတာအတည်ပြုဖို့အတွက် အီးမေးလ်ဖြစ်ဖြစ် ဖက်စ် ဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးနိုင်မလား။
arrive = ဆိုက်ရောက်သည်။
bath = ရေချိုးသည်။ ရေချိုးကန်
breakfast = မနက်စာ
sauna = ချွေးထုတ်ခန်း
suite = ဧည့်ခန်း၊ ပရိဘောဂပါ ဟိုတယ်အခန်း
twin(room) = တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်နှစ်လုံးပါအခန်း
departure = ထွက်ခွာခြင်း
ဟိုတယ်ဝေါဟာရအရ adjoining room နဲ့ adjacent room ဆိုပြီးရှိပါတည်။ adjoin နဲ့ adjacent နှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ဘေးကပ်လျက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပေမယ့်ဟိုတယ်အခန်းပုံစံမှာတော့ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ adjoining room ဆိုတာ အခန်းကြယ်ကြီးနှစ်ခုကို အခန်းနှစ်ခန်းပိုင်းထားလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ခန်းကို ဆက်သွယ်မယ့် အလယ်ကတံခါးတစ်ခု ရှိမယ်။ တံခါးသော့ကို နှစ်ဖက်စလုံးကပိတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားမယ်။ adjacent room ကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ ဘေးကပ်လျက်အခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
arrive ဟာ သူ့နောက်က preposition သုံးမျိုးနဲ့တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ၀ိဘတ်မပါဘဲလည်းသုံးနိုင်တယ်။ နေရာအချိန်ကိုလိုက်ပြီး သုံးတဲ့ဝိဘတ်ကွဲပြားသွားပါတယ်။
He arrived at the station/school/hospital..
He arrived within/in 10 minutes.
I will arrive on tuesday
နိုင်ငံတွေ၊ မြို့တွေ၊ ယေဘုယျနေရာတွေကို in နဲ့သုံးပါတယ်။ တိကျတဲ့နေရာတွေကို at နဲ့သုံးပါတယ်။
အချိန်အတိအကျတစ်ခုအတွက် at ကိုသုံးပါတယ် (e.g. 5)။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းအတွက် in ကိုသုံးပါတယ် (e.g. 6)။ နေ့ရက်နာမည်နဲ့ကြတော့ on ကိုသုံးပြန်ပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတွေမှားတတ်တာက arrive to ဆိုပြီးမြန်မာလိုတွေးပြီးရေးတတ်ပြောတတ်တာပါ။
✗ He meets them at an inn before they arrive tothe house.
✓ He meets them at an inn before they arrive at the house.
ဒါပေမယ့် home နဲ့ကျတော့ preposition မလိုပြန်ဘူး။
✗ When they finally arrive at home, all they want to do is sleep.
✓ When they finally arrive home, all they want to do is sleep.
သု့အသုံးအနှုန်းတွေကို dictionary တစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
Present Simple Tense မှာ Do/Does နဲ့မေးခွန်းတည်ဆောက်ခြင်း
မေးခွန်းတွေကိုအခြခံအားဖြင့်ပုံစံနှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ ရှိသလား/ဖြစ်သလား လို့မေးတဲ့ လား မေးခွန်း Yes/No question နဲ့ Wh နဲ့စတဲ့ ဘခြောက်လုံးမေးခွန်း information question ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Yes/No မေးခွန်းကိုပဲလေ့လာသွားမှာပါ။ Yes/No မေးခွန်းရဲ့အဖြေဟာ yes သို့မဟုတ် no ပဲဖြစ်ပါတယ်။
I readabook. (S အများ)
Peter plays football. (S အနည်း)
Subject ကိုကြည့်ပါ။ Plural ဖြစ်ပါက Do နဲ့စပါ။
Do/Does/Did ရဲ့နောက်မှာရှိသည့် verb သည် base form ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် s/es တွေပါလျှင်ဖြုတ်ပါ။
မြန်မာကျောင်းသားတွေမှားတတ်တာက Do you read book? လို့မေးရင် Yes, I read. လို့ပြန်ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကမေးခွန်းကိုပြန်ကောက်ပြီး Do နဲ့မေးရင် Yes, I do.
Does နဲ့မေးရင် Yes, he/she/it does ပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
serve lunch/dinner/afternoon tea?
haveaparking space/swimming pool/sauna?
haveadouble room/twin room/single room?
the hotel haveasauna/restaurant?
the bar open at lunchtime/in the evening
ဥပမာ ။ Do you serve dinner?
၂ ။ အောက်ပါ preposition နမူနာတို့ကိုကြည့်ပြီး မှန်ကန်သည့် preposition ကိုသုံးလျက် မေးခွန်းနှင့်အဖြေပြန်ရေးပါ။
on Monday, on1st September,
at 8.30, at 15.00, at the weekend, atChristmas,
in two weeks, in sSeptember, in 2005, inspring,
in the evening, from 12.00 to 3.00, from 2001 to2004
A. Does the bank close on Mondays? (Sundays)
B. No, it closes on Sundays.
1. the restaurant close/Sundays?(Mondays)
2. the exchange bureau open/9.00? (yes)
3. the shops close/the weekend? (no)
4. the summer season start/July?(June)
5. you serve tea/the afternoon? (yes)
6. the hotel serve dinner/7.00-11.00? (7.00-10.00)
၃။ အောက်ပါ အတည်ပြုသည့် အီးမေးလ်ကို ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ။
table 7.30 twin
reserved confirm carpark
We .................1 your erservation ofadouble and adjoining ................... 2
for five nights from 18 to 22 June. A parking space ........................3in the hotel
......................4anda............................5for four is reserved in the restaurant
for dinner at ......................6.
We look forward to seeing you and your family on Monday 18 June.
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဧည့်သည်ကမေးလာမည့် အခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားပြီး အခန်းစရံသတ်တာကို လက်ခံနိုင်အတည်ပြုနိုင်ပြီဟုယူဆမိပါတယ်။
Permalink Reply by khinthidasoe on October 31, 2012 at 8:47
very many thanks my teacher!
Permalink Reply by Zayar Phyo on October 31, 2012 at 16:00
Permalink Reply by Mya Mya Thein on October 31, 2012 at 20:00
Thanks for giving study chance
Permalink Reply by Innwa on November 1, 2012 at 18:50
Permalink Reply by Aunghtoolynn on November 1, 2012 at 20:56
ဆရာ ကိုဇာနည် ( MyWay! ) ခင်ဗျား...
English for Hotel and Catering Industry Unit-1 ကို ကျွန်တော် Gmail Account မှာရော ဒီ myanmar-network မှာ ရှာမတွေ့ လို့ခင်ဗျ။ ဆရာ ခင်ဗျား ဖြစ်နိူင်မယ်ဆို Unit- 1ကို ကျွန်တော့်မေးလ်အကောင့်ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာနက်ဝပ်ဆိုဒ် မှာဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်လည်တင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား...။
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on November 2, 2012 at 8:40
Permalink Reply by Gyit on November 3, 2012 at 15:14
Always Thanksalot
Permalink Reply by zawzawmyint on August 10, 2013 at 12:21
Thanksalot for your explanation .
Permalink Reply by Myo Myint Aung on November 12, 2015 at 13:40